रावणलाई बध गरेपछि के भयो मन्दोदरीसँग ? | BeniOnline.com.np जिल्लाका ताजा अनलाइन समाचार
Home विविध रावणलाई बध गरेपछि के भयो मन्दोदरीसँग ?
रावणलाई बध गरेपछि के भयो मन्दोदरीसँग ?
२०७४, १७ आश्विन मंगलवार १३:०८
रावणलाई बध गरिएपछि मन्दोदरीलाई के गरियो ? उनको बाँकी जिवन कस्तो रह्यो ? यसबारे खासै सोधीखोजी भएको छैन । प्रामाणिक गन्थ्रमा मन्दोदरीको बारेमा एकदमै थोरै लेखिएको छ । यद्यपी केही किंबदन्ती प्रचलनमा छ । मन्दोदरीलाई चिनाउने एउटै विशेषण छ, लंकापति रावणकी पत्नी । यत्तिमै उनलाई सीमित गरिएको छ । जब रावणको मृत्यु हुन्छ, मन्दोदरीको अध्यय पनि अन्त्य हुन्छ ।
-रावणको वधपछि मन्दोदरी रणभूमीमा पुगिन् । त्यहाँ पति, पुत्र र आफन्तको शव देखेर शोकमा डुबिन् । तर, उनलाई श्रीरामले आश्वसन दिदै भने, ‘तपाई अझैपनि लंकाको महारानी र बलशाली रावणकी विधवा हुनुहुन्छ ।’ त्यसपछि मन्दोदरी लंका फर्किन्छन् ।
-अद्भूत रामायण र केहि अन्य ग्रन्थमा उल्लेख गरिएको किंबदन्ती अनुसार पति र पुत्रको वियोगमा मन्दोदरीले स्वंमलाई महलमा कैद गरेर राखिन् । उनले पूर्ण रुपमा बाहिरी संसारसँग सम्पर्क टुटाइन् । त्यसपछि विभिषण लंकाको राजपाट सम्हाल्न आइपुगे ।
-एक कथन यस्तो पनि छ कि, बर्षौ पछि मन्दोदरी आफ्नो महलको बाहिर निस्किएकी थिइन् र विभिषणसँग बिवाह गर्नका लागि तयार भएकी थिइन् । बिवाहपछि उनीहरु दुबै मिलेर लंकाको साम्राज्य बिस्तार गरे ।
जब मन्दोदरीले शिवलाई आकषिर्त गर्ने प्रयास गरिन्
-हिन्दु पुराणमा मन्दोदरीलाई मथुरा नामले चिनिन्छ । एक कथा अनुसार एक पटक मथुरा नामकी अप्सरा कैलाश पर्वतमा पुगिन र देवी पार्वती त्यहाँ नदेखेपछि भगवान शिवलाई आकषिर्त गर्ने प्रयासमा लागिन् ।
-तब पार्वती त्यहाँ पुगिन् र क्रोधित भएर अप्सलाई श्राप दिइन्, ‘तैंले १२ बर्षसम्म भ्यागुता बनेर कुवामा बस्नु परोस् ।’
-भगवान शिवले पार्वतीलाई त्यो कठोर तपपछि अप्सराले पुन आफ्नो स्वरुपमा र्फकन सक्ने बताए । त्यसपछि लामो समयसम्म मथुरा कठोर तप गर्न लागिन् ।
-त्यही क्रममा असुरोका देवता मयासुर र उनकी पत्नी अप्सरा पत्नी हेका एक पुत्र प्राप्तीका लागि तपस्या गरिरहेकी हुन्छन् । त्यही मथुरा आफ्नो कठोर तपस्याबाट श्राप मुक्त हुन्छिन् ।
-एक कुवाबाट मयासुर र हेमाले मथुराकी आवाज सुन्छन् । मयासुरले मथुरालाई कुवाबाट बाहिर निकाल्छन् । र, छोरीको रुपमा काखमा लिन्छन् ।
-मयासुरले आफ्नो काखमा लिएकी छोरीको नाम मन्दोदरी राखिन्छ, जसको बिवाह रावणसँग हुन्छ । onlinekhabar.com
Previous articleबेनी-जोमसोम सडक अवरुद्ध, बेगखोलाले ट्याक्सी बगायो
Next articleरातोमाटो आयस्रोतको माध्यम